Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka iPhone in Lugood
> Resource > Lugood > Transfer Videos ka iPhone in Lugood
Ma diiwaan video ah leh iPhone, hadda u baahan tahay si ay u gudbiyaan video ka iPhone in Lugood u gurmad? Haddii aad isku daydo inaad tan samaysaan la Lugood, markaas waa in aan ku odhan in aad ku socoto in ay ku fashilmaan. Lugood kaliya gelineya inaad si ay u gudbiyaan videos ka Lugood si iPhone, laakiin sida aan ka dib. Si videos ka iPhone wareejiyo Lugood, waxaad isku daydaa inaad barnaamijyadooda iPhone xirfadeed. Halkan, ee qodobkan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa in aad Wondershare TunesGo . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad tranfer videos ka iPhone in Lugood in kaliya 2 tallaabooyinka.
Download TunesGo Wondershare in aad nuqulka videos ka iPhone in Lugood. Waxayna u shaqaysaa iyadoo Windows 8, Windows7, Windows XP, iyo Windows Vista oo ku salaysan PC aad u wanaagsan. TunesGo si buuxda u la jaan qaada oo dhan iPhone, eeg taageeray iPhone iyo macruufka habka looga baahan yahay halkaan.
Tallaabada 1. Daahfurka barnaamijkan iyo in ay ku xirmaan iPhone la computer via cable USB ah
Bilowga, download barnaamijkan on your computer. Waxaa rakib. Ka dib markii in, waxaa lagu daahfuri by double riixaya icon "Wondershare TunesGo" on desktop computer aad. Markaas, xiriiriyaan iPhone la computer via cable USB ah. Barnaamijkan wuxuu si toos ah waxaa lagu ogaan doonaa marka uu ku xiran.
Fiiro gaar ah: Inkasta oo aanad u baahnayn isticmaalka Lugood si hagaagsan videos in aad iPhone, waa in aad weli ku rakibi Lugood on your computer. Hadda, Lugood 11 si buuxda loo taageeray.
Tallaabada 2. dhoofinta filimada ka iPhone in Lugood
Guji "Media" in navigation Murayaad bidix. Markaas, furmo warbaahinta, guji "Movies" inay soo qaadaan suuqa kala maamulka filimka. Dooro wax filimada in aad rabto in lagu wareejiyo, oo guji "Dhoofinta in". In liiska jiido-down, dooro "Dhoofinta in Lugood Library". Marka uu dhamaado, waa in aad guji "OK" si ay u soo afjaraan.
In ilbiriqsiba, aad arki doonaa videos ayaa loo wareejiyay ka iPhone in Lugood. Hadda, furo Lugood oo u fiirso filimada ah! Wondershare TunesGo waa tababare macruufka waxtar leh oo dhamaystiran. Ka sokow filimada ka iPhone gudbaayo Lugood , waxa aad awoodi kartaa in aad nuqulka music, playlists, Podcasts, bandhigyada TV, Lugood U, Music videos, iyo buug Audio sidoo. Haddii aad rabto in aad dib u kor ku jira kuwaas oo si aad computer ay dhacdo in aad iyaga tirtirto shil, kaliya aad u baahan tahay in aad ku dhufo "Dhoofinta si aad u computer".
Sida loo Download Music ka iPad in Laptop